Rubric: Yechipiri ndiro
Kubika zvinonaka zvinokonzera nyama yenguruve zvinoda kushivirira. Nguva yakanyanya nyama yakabikwa, tastier ichabuda. Mukuwedzera, yenguruve iri pfupa yakasviba uye ine tambo isina kunaka. Iyo nguruve yenguruve yakaisvonaka mu ...
Benderiks inonyanya kubikwa munzvimbo dzekumadokero dzeUkraine. Zvechokwadi, izvi ndezvokudya zvepakake nenyama yekuzadza. Asi kwete tsika dzepasitori-mavara, uye dzakapetwa mumatatu. Kuzadza Benderik juicy uye ...
Tafura yako yeGore Idzva ichaita seyiyo yechokwadi, kana iwe ukaisa turkey pairi. Guru, jicy, rinopa uye rakanyanya, rinonaka kwazvo! Nokuda kwe7-8 servings, zvinhu zvakakodzera: 1 iguru guru ...
Unofarira chikafu chinonaka nechesi? Ndeipi iyo inopedzisa kunakidza kwechikafu, ichiita kuti ive yakakosha? Zvadaro nzira yedu yehuku ne cheese mipira ichakutorera iwe! Kupa mhuri dzikave fried chika nekunakirwa ...
Nzira yekuchera chikamu chemuviri wegorosi podcherevok kana kuti iyo inonzi nemafuta nematanda enyama Ndinokurudzira kubika podcherchevok. Dururira munyu 4st pane chikamu chemukati chemafuta. spoons pa 1kg uye tsvuku ...
Nzira yekubika jisi kana mapira mapeji nemukaka? Pane here mapepa mapepa akaedza kuita? Pandinenge ndichiyera magirasi nemapuni zvinoshanduka zvakashata, ini ndiri paziso uye pamusoro pekunaka uye yose ...
Ndinogona here kunya mbatatisi nemafuta akafuridzirwa kana mushonga? Iwe unogona Fry imwe mbatata, uye idya iyo ine salted uye yakashambawa mushroom (iwe haufaniri kuidya) Fryidza mbatata nemafuta akafukidzwa ...
Nzira yekukuridzira bhariri kuti iome sei? Dururira zviyo muhari uye uzviise pasi pemvura ine nyoro yemvura, fambisa kusvikira zvinenge zvese zvakashambidzwa (iyi ndiyo upfu hwakatangwa munguva yekufambisa kwezviyo ...
Iwe unogadzira sei girafu yezvokuputika? Chikoroti changu chikamu chekuzadza (anyanisi, karoti yakasvibiswa, mupunga anobika zvishomanana, nyama yakabikwa inobatanidzwa - kungoshandura ruvara uye kuva ...
Nzira yekubika jisi? saka anofambisa ruvara rweruvara? akanzwa nehuturi kana chii chinoda kuwedzerwa? Safron chete inogona kupa zvose ruvara uye zvinonaka. Dutu remhepo richapa ruvara, asi kwete icho chinonaka.
Nzira yekubika sei moyo, chiropa uye mapapu? nyama yenguruve Wakamboedza Bull EGGS kudya? Ivo vanoti zvinonaka)) Nakavimbika, ini handizive kuti kubika sei zvinhu zvakadaro.)) Zvirinani chokwadi, kucheka ...
Nzira yekuita hove zvingwa kubva kunhove dzehove?
Mibvunzo ye114 mu database yakagadzirwa mu 0,835 masekondi.